Nhau - Sarudza iyo mask muchina iwe unofanirwa kuziva anotevera mapoinzi
Mazuva ano, vanhu vazhinji uye vazhinji vanoona musika wemasikisi ekudzivirira, uye zvakare vanoona maitiro ekusimudzira emangwana. Musika wacho wakakura kwazvo. Vazhinji uye vanhu vazhinji vanosarudza kutenga michina michina kuti ive vagadziri ve mask. Iwe unayo inotevera inotevera mikana yekufunga kana uchisarudza mamask?
1. Mazuva ano, vanamuzvinabhizimusi uye shamwari dzinofunga nezvebhizinesi vese vanosarudza kuita chigadziko chemaskiti sekutevedzera mutemo. Sei tichidaro? Zvinonyanya nekuda kwekusvibiswa kwezvakatipoteredza. Zvino, vanhu vazhinji vanopfeka mamask pavanobuda. Vamwe vanhu vane mukurumbira vanotaura kuti indasitiri yemasikisi ichawedzera kufarirwa. Kubva pane zviri pamusoro izvi, zvakare inoisa hwaro hwakakura hweiyo ramangwana indasitiri yemasikisi Kuti ikwanise kuwedzera kugadzirwa kwemasikisi uye kuzadzikisa kudiwa kwemusika, vagadziri vemaski vakatora akasiyana masiki michina nemidziyo yekujoinha chigadzirwa.
2. Iko kushandiswa kweichi michina yekugadzira uye zvishandiso hazvigone chete kuchengetedza vashandi, chengetedza nguva yekugadzira nekushandisa kwekushandisa, asi zvakare simbisa kugadzirwa kwakaringana, kuverengera mhando yezvigadzirwa zvichingodaro. Inounza chiitiko chakasiyana kubva kugadzirwa kwemanyorero kune yavo yekugadzira bhizinesi, saka iko kufambira mberi kukuru kwevagadziri vemaski. Kunyangwe kugadzirwa kwemasikisi kuchiona kukurumidza kukura uye kuvandudzwa kwemabhizimusi nemidziyo iyi, asi nemabhizinesi mazhinji uye akawanda achijoinha indasitiri yezvigadzirwa zvemuchina, kana vagadziri vemaski vachida kuhwina, vanofanirwa kugadzirisa kukwikwidza kwemabhizinesi nekusarudza akanakisa.
3. Chero bhizinesi rinogona kumhanyisa capital inosungirwa kuve shoma, uye kunyangwe iko kushandiswa kwemasikisi michina kunogona kuve kugadzirwa kwakanaka kwazvo, asi kushandiswa kwemidziyo uye kugadzirwa kwemishini kune mashoma. Kana iro bhizinesi richikura rihombe uye hombe, michina mishoma chete haina kukwana. Kuwedzeredza kudyara mumasikisi michina michina kunogona kuunza purofiti yakawanda, uye kutenga mimwe michina nemari shoma kunounza chero hupfumi hushoma, izvo zvinobatsira zvakanyanya mukuvandudza mabhizinesi.
Zvino, izvo zvinodikanwa zveiyo indasitiri yemask ndeyokuti mari yevanamuzvinabhizimusi ishoma. Kuti vakurumidze kudzorera mutengo uye vauye nemari yakawanda kwavari, ivo vachasarudza kutenga zvigadzirwa zvemidziyo. Kuiswa kweManyorero kunogona kuchengetedza mari yakawanda, uye kugona kwacho zvakare kwakanyanya. Iyo yekukurumidza kukurumidza inokodzera kwazvo kutanga kwekutanga-kumusoro, uye makuru-masiki masiki vagadziri vachatenga mimwe michina Wedzerai musika share, kuunza mari yepamusoro uye kusimudzira kuri nani kumabhizinesi.
asiri rakarukwa chifukidzo kugadzira muchina, kuvhiya kumeso mask kugadzira muchina, hosipaipi yekuchina muchina, asiri dzakarukwa kumeso chifukidzo kugadzira muchina, kumeso mask kugadzira muchina, kuvhiya chifukidzo kugadzira muchina,